TopHR – Myanmar Top Recuritment Agency
မြန်မာအလုပ်သမားဥပဒေပေါင်းချုပ် , Download Here | Our Company Profile View Here
TOP HR ရဲ့ မြန်မာနစ်သစ်ဆုတောင်း
ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါဘေးဖြစ်တဲ့ COVID-19 ကြောင့် စိတ်ပင်ပန်းနေကြရတဲ့ မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ၊ အထူးသဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ထိခိုက်မှု ခံစားကြရလို့ ပူပင်မှုကိုယ်စီနဲ့ အလုပ်ရှင်များ၊ ဝန်ထမ်းများ အားလုံးအတွက် စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ ချမ်းသာခြင်းများ ပြည့်ဝကြပါစေကြောင်း TOP HR Solutions Team မှ နှစ်သစ်မင်္ဂလာဆုတောင်းစကား ပါးလိုက်ပါတယ်။
Top Hr Book
Welcome from TOP HR
We are the go-to provider for HR consulting services. We pride ourselves in advising companies onawide range of issues and inefficiencies in human resources and delivering expert solutions.
Top HR Recruting Services
Top HR Payroll Solutions
Devoting to payroll-related activities yourself requiresagreat deal of time and attention to detail. To free up precious time and concentrate on core business, outsourced services bring business ownersasolution to accurate and timely payroll records and tax filings.
Top Learning Center & Training service
Training & classes of senior teachers
လူ့စှမြးအား အရငြးအမှဈ စီမံခန့ခြှဲမှုနှင့ြ ပကသြကသြည့ြ ဝနဆြောငမြှုမွားအားလုံး တဈနရောတညြးမှာ ရရှိနိုငပြါပှီ